Ramaroson Laurent : « Mitavozavoza sy manao kolikoly io fitondrana io » | NewsMada
Ramaroson Laurent : « Mitavozavoza sy manao kolikoly io fitondrana io »
Namatrapatratra mafy mihitsy. Nitondra ny heviny momba ny fiainam-pirenena sy ny fitantanan’ny mpitondra ny birao politikan’ny antoko Malagasy miara-miainga, Ramaroson Laurent. Nohitsiny tamin’ny fandaharana « Ambarao » ao amin’ny onjam-peo Alliance 92 omaly fa tokony hiala izao fitondrana izao. Ampahan’ny resadresaka…
Efa namelona lakolosy hatramin’ny fiandohan’ny taona ny antoko Malagasy miara-miainga ny amin’ny tokony handraisana fepetra manoloana ny fihanaky ny valanaretina, araka ny nambarany. Notsiahiviny fa efa nisy zava-nitranga tany Toliara noho ireny vaksiny natao teto ireny. Noraisiny ho ohatra ny vata fampangatsiahana nitondrana ny vaksiny… « Hafa ny vidiny an-tsoratra nambara amin’ny mpamatsy vola satria avo 100 heny… Hisy zava-doza eto raha tahaka izany ny fitantanana isorohana ny valanaretina eto. Efa anisan’izany ny tazo sy ny pesta. Io izy io. Ka aminay, mitavozavoza io fanjakana io ary manjaka ny fanodikodinam-bola sy kolikoly. Manjaka amin’ny sampandraharaham- panjakana hatrany ambony izany ary mitera-doza amin’ny vahoaka. Mampalailay fonosana ny mpamatsy vola… Manampy ireo ny nambaranay fa lalana mankany amin’ny fahafatesana ny hopitalim-panjakana”, hoy izy.
Efa nambaran’ny Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo
Momba ny fiakaran’ny vidim-piainana, nambarany fa tokony hiala ny fitondrana. Miakatra ny vidim- bary nefa nilaza ny fitondrana fa tsy misy olana ny vary… Nanome fanampiana vary an-taoniny ny Sinoa…Nankaiza izany ary voatsinjara ve ? Iza ireo mpanafatra vary ary nankaiza izany ? Tsy nidina ny vidim-bary fa niakatra ary efa mahenika ny sarangan’olona rehetra ny tsy fahatakarana ny vidiny, araka ny fanamafisany… “Zava-doza ny hitranga eto raha tsy hatao ny fifidianana, araka ny efa nambaran’ny filoha nasionalin’ny Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo azy teto. Tsy mahafehy ny fiainam-bahoaka ny fitondrana…”, hoy ihany Ramaroson Laurent. Nohitsiny fa misy ny vahaolana teknika saingy tsy manana finiavana hamaha olana ny fitondrana.
Nitondrany ny heviny koa ny nanendrena an-dRakotovao Rivo ho loholona, amin’izao ankatoky ny fifidianana izao ary amin’ny fotoam-pivorian’ny parlemanta. “Maromaro ireo tolo-dalana hodinihina. Eo koa ny mety hikitihana ny lalàmpanorenana. Ho hita soritra amin’ny tetibola eo ny finiavana hanao fifidianana na tsia. Matahotra mafy ny ankamaroan’ny mpitondra afrikanina amin’io lalàmpanorenana io ka anisan’izany ny eto amintsika.. Efa ao an-dohan’ny mpitondra ny hanova azy io lalàna fototra io ka hametrahany olona mahatoky ho filohan’ny Antenimierandoholona, ahafahana manova ny lalàna fototra. Tsy mipetraka intsony ny fifampitokisana amin-dRakotomanana Honoré sy ny filoha Rajaonarimampianina…”, hoy ity birao politikan’ny Malagasy miara-miainga ity.
Tsy mbola azo ny tambin-karaman’ny sefo fokontany
Notebahiny fa kankana atao jono hifidianana ny lalàmpanorenana ny filazana fa homena hasina ny fokontany. Hanamarinana ny fikitihana izany io. “Teo ianao firy taona ianao, tsy nanome hasina ny fokontany ? Firy taona ianao teo, tsy nomena hasina ny kaominina. Efa izao vao hoe hapetraka izany ? Tsy nomenao tambin-karama telo taona ireo sefo fokontany ireo. Mba tao anaty fandaharanasanareo ve izany resaka fokontany izany”, hoy izy.
Aza manaiky hobaikoina ianareo parlemantera
Notsindriny fa hametraka amin’ny toerany ny fahefana mifanandrify amin’ny fokontany ny antoko Malagasy miara-miainga ary manana fandaharanasa mazava momba ny tena fitsinjaram-pahefana, hampihavana ny Malagasy. “Omena fahefana araka ny tokony ho izy ny eny ifotony sy ny fiaraha-monina”, hoy ihany izy. Natsidiny fa anjaran’ny kandidà amin’ny fifidianana ny mampiditra anaty fandaharanasa momba ny fametrahana ny rafi-pitantanana ny fanjakana hatrany ambany ka hatrany ambony…
Niantso ireo depiote koa ity birao politika ity, indrindra ho an’ireo mbola hilatsaka hofidiana. “Tonga ny fotoana hiombonana fo amam-panahy amin’ny vahoaka. Aza manaiky hobaikoin’ iza na iza intsony. Mazava ny baiko, alefaso ny fifidianana. Tsinjovy ny sosialim-baoaka. Aoka ny feon’ny fieritreretana no hibaiko fa tsy ny malety…”, hoy Ramaroson Laurent.